Home » Vaovaon'ny seranam-piaramanidina » Tsy misy zotram-piaramanidina amerikana amerikana: UAE, Oman, Irak, Iran ary ny Faritra Golfa
The Fahefana avaratra federaly amerikana nandrara ireo mpandraharaha sivily amerikana tsy hiditra amin'ny habakabaka mihoatra an'i Iràka, Iran, Golfa Persiana ary ny Hoalan'i Oman.
Ny FAA dia nanonona ny mety hisian'ny fikajiana diso na fanondroana diso ny fameperana ireo mpandraharaha sivily sivily amerikana.
Ny sasany amin'ireo mpitatitra fiaramanidina iraisampirenena dia misoroka ny habakabaka koa. Singapore Airlines dia nanambara fa mamily sidina avy amin'ny habakabaka iraniana mankany Eropa izy, hoy ny tatitra nataon'i Bloomberg.
Ny fampandrenesana FAA dia tonga ora maro taorian'ny andraikitr'i Iran ny fandefasana balafomanga balafomanga mahery am-polony tany Irak izay nikendry ny tafika amerikana sy ny fiaraha-mitantana.
Mandritra izany fotoana izany, a Ny fiaramanidina mpandeha Okrainiana nianjera tany Teheran ary tsaho momba ny zana-balafomanga voadona no resahina.
Ny fameperana apetraka dia tsy misy fiatraikany lehibe amin'ny fifamoivoizana amin'ny rivotra mankany amin'ny faritry ny Helodrano satria tsy misy fiaramanidina ara-barotra avy any Etazonia manidina ao.